संसदमा के के बोले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ? (सम्बोधनको पूर्णपाठ) - samayapost.com
संसदमा के के बोले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ? (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
समयपोष्ट २०७३ भदौ २३ गते ७:३४
सम्माननीय सभामुख महोदय आज म यो सम्मानित संसदबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्ना धारणा र योजना राख्न उपस्थित भएको छु ।
४८. यो पछाडि फर्कने बेला होइन । अरु विकसित देशलाई हेरेर कुण्ठा, हीनता र लघुताभासमा जेलिने बेला पनि होइन । मैले पहिल्यै भने“, अब गुनासो र आरोपित गर्न राजा महाराजा छैनन् । यो देश हामीले नै बनाउने हो, बनाउन सक्छौं, बनाउछौं । पौने तीन करोड नेपालीले साझा संकल्प गरौं, यो देश जुरुक्कै उठ्ने छ । म पनि ठूलो आ“धीबेहरीबाट गुज्रेर आएको व्यक्ति हु“ । कमजोरी भए होलान् तर हिजो बन्दुक उठाउ“दा पनि र बन्दुक बिसाउ“दा पनि मेरो मस्तिष्कमा देशको समृद्धिबाहेक केही थिएन । म मेरो पार्टी पंक्तिलाई पनि आग्रह गर्छु, हिजो हामी देशका लागि रगतसमेत बगाउन तयार थियौं भने आज त पसिना बगाए पुग्छ । एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल अब पनि पिछडिएकै अवस्थामा बस्न सक्दैन । समुन्नत नेपाल हाम्रै जीवनमा सम्भव छ । तर त्यसका लागि हामीले आजैदेखि र अहिल्यैदेखि समर्पित हुनुुपर्छ । हिजो झन्डै पूरै एसिया उपनिवेश हु“दा पनि महाशक्तिहरूस“ग आमनेसामने जुधेर स्वाधीनता जोगाउने यो महान् देशस“ग फेरि एकपटक महान् बन्ने सबै क्षमता छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर त्यो क्षमताको प्रदर्शन गरौं ।